စည်းရုံးရေး သတိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Critic » စည်းရုံးရေး သတိ	16
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 22, 2015 in Critic | 16 comments
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အမှန်တကယ် ချစ်ခင်လေးစား သူများ အတွက် စည်းရုံးမှု ပုံစံ ကို ဆင်ခြင် သတိထားကြဖို့ အတွက် ပါ။
မနေ့က အင်တာနက်မှာ သတင်းလွှင့်တာ ကြည့်ရင်း အဝိုင်းလည်နေတုန်း ဘေးက Chat Box ကို ကြည့်နေမိတယ်။
တစ်ချို့ က NLD, NLD ဆိုပြီး မပြတ်တင်နေတယ်။
.နောက် တစ်ချို့က အဲဒါကို ဆဲ တယ်။
သူတို့ နှစ်စု ထဲ ဘဲ စက္ကန့်မလပ် မပြတ်တင်နေကြတာ။
အဲဒါကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ တစ်မျိုး ဖြစ်လာတယ်။
ဒီလိုသူ တွေ ဟာ ဟောပြောနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ စကား ကို နားထောင်ချင်လွန်းလို့ မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့။
မိန့်ခွန်းလာနေတာကို အာရုံမစိုက် နားမထောင်ဘဲ ဘေးမှာ အလုပ်များပြ နေတာ အဖျက်သဘောဆောင်ပါတယ်။
အသိဉာဏ် နဲ ရာရောက်ပါတယ်။
အဲဒီ ကနေ စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ သံသယ ရှိမိတာလေး ကို သတိပေးပါမယ်။
တကယ်လို့ ဒီချုပ် ကို စစ်မှန်တဲ့ စေတနာ နဲ့ အားပေးသူ ထဲ က ဖြစ်ခဲ့ရင် တစ်ဖက် ကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း အပုတ်ချ ဆဲဆိုတာ ရှောင်ဖို့ပါ။
သူတို့ဘက်က မကောင်းတာလုပ်နေလဲ ရှောင်ထွက်ကြပါ။
စိတ်တိုလို့ ဆဲချင်ရင် အပြင်မှာဘဲ ကိုယ့်ဟာကို အော်လိုက်ပါ။ အများမြင်တဲ့ စာမျက်နှာတွေပေါ် တက်မလာသင့်တော့ပါ။
ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပြောချင်ရင်လဲ အဆင့်ရှိရှိ စကာလုံးများ နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးတုန့်ပြန်ပါ။
အဲဒီလို မှတ်ချက်မျိုး ဆိုရင် သူတို့ ကြောက်ပါတယ်၊ ဖျက်ပစ်ပါတယ်။ သူတို့ Page တွေပေါ် မထားရဲပါ၊ ပက်ပက်စက်စက် ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း စကား တွေ ကို မဖျက်ဘဲ ထားပါတယ်။ အသေအချာအကြောင်းအကျိုးပြပြီး ရှင်းပြ ရင် ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီထဲ က သူတို့ ဘက်က ဆဲပြလေ ရိုင်းပြလေ ကြိုက်လေပါ။
NLD ဒီမို တွေ ရိုင်းသပေါ့။
ဒီတော့ သူတို့ စိတ်ကြိုက် မဖြစ်အောင် နေကြပါ။
ကိုယ့် သိသူ လူအချင်းချင်း သတိပေးပါ။
ဒီလို သတိပေးနေရက် နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလဲ ဆက်ကျူးလွန်နေရင် အဲဒီလူဟာ တစ်ခုခု မှားယွင်းနေပြီး မရိုးသားဘူး လို့ ယူဆလို့ ရပါတယ်။
သူဟာ တစ်ခုခု ကို မကောင်းတဲ့ အကြံနဲ့ ဒီချုပ်လူ လို လုပ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ စစ်ဆင်ရေး တွေမှာ ကိုယ့်လို လူတွေ နဲ့ ပူးနေပြပြီး ငခုံးမ လုပ်လိုက်တော့ တစ်လှေလုံးပုတ် တဲ့ သဘောပါဘဲ။
ဒီတော့ ငခုံးမလို ပါလာရင် သတိပေးပါ။ မရရင် သူ့စာတွေ ကို လုံးဝ မမျှပါနဲ့တော့။
မနေ့ည က လူသတ်မှု လို့ ထင်ရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ကို မှူးဇော် ဆိုတဲ့ သူက ရေးပြီး ပြန်ဝန် ရဲ့ Page မှာ မျှထားတယ်။
ပြီးတော့ အဲဒီကနေ ကောလဟာလ မလွှင့်ကြဖို့၊ ပေါက်ကရပုံ မတင်ဖို့ ပြောတယ်။
ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ အကြောင်း က သူတို့ ပြန်ဝန် ရဲ့ လူသိရှင်ကြား Page မှာတက်မှ ပွမှာ ဆိုတာ သိသိ နဲ့ တင်တာလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပြသနာက သူတို့ ရဲ့စေတနာက စစ်ရင်တောင် သံသယ ဖြစ်တဲ့ စိတ် နဲ့ တွေးနေတတ်ကြတဲ့ ပြည်သူ တွေ ဖြစ်နေကြတာမို့ သူတို့ ထင်သလို မပြန့်ခဲ့ဘူး ထင်ရဲ့။
အခုတော့ နောက် တစ်ခု။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ပြောနေတာကို MRTV ကဖျက်ယဖျက် လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း။
အဲဒီနောက်မှာ ကိုယ့်တို့ လူတွေ တစ်ချို့ ဆတ်ဆတ်ခါကြပြန်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ကြားကနေ မြန်မာ့ရုပ်မြင်က လူတွေ နဲ့ ဒီချုပ် က လူတွေ ကို သွေးခွဲပြန်တယ်။
ဟုတ်လား/ မဟုတ်လား ဆိုတာ ကို သတင်း မမှန်ဘဲ နဲ့ ဘာကိုမှ မယုံကြဖို့၊ အဲဒီကနေ သွေးမဆူကြဖို့၊ စကားလုံးတွေ မရိုင်းဖို့ သတိပြုကြဖို့ သင့်ပြီ။
သွေးခွဲတယ်၊ သပ်ရှိုတယ် ဆိုတာ ဆင်ခြင်ဉာဏ် အသိလေး နဲ့ စဉ်းစားနိုင်ရင် လုပ်လို့ မရပါဘူး။
အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမုန်းပွါးနိုင်တဲ့သတင်းများ ကို သတိပြုကြပါ။
Live မဟုတ်တာ ဖြစ်လို့ ညစ်ချင်တိုင်း ညစ်လို့မရပါဘူး။
နောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့သူ အများစုက မရိုင်းလောက်ပါဘူး။
ရိုင်းသူများ က မျက်နှာချင်းတောင်မဆိုင်နိုင်/ရဲ ကြပါ။
ဒီတော့ MRTV က တာဝန်ရှိသူတို့ ကို အပြစ်မမြင်ဘဲ သူတို့လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားကြမှာဘဲလို့ ယုံလိုက်ကြရအောင်ပါ။
စည်းရုံးရေးမှာ သတိပြူသင့်တဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။
ဟိုဘက်လိုလို ဒီဘက်လိုလို ဖြစ်နေတဲ့ “လူ ပုဂ္ဂိုလ် ရဟန်း” များ ကို ကိုယ့်ဖက်က လို ဟန်ပြုပြီး မသုံးကြစေလိုပါ။
သိက္ခာရှိပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့ စကားလုံးများ၊ သူများကို နစ်နာအောင် မပုတ်ခတ် တဲ့ စာသား များ သုံးပြီး စည်းရုံးကြပါ။
ကိုယ်ကစပြီး ယဉ်ကျေးအောင် အဆင့်ရှိအောင် နေပြပြီး ပြောစရာလိုရင် အကြောင်းအကျိုး သင့် ရှင်းပြ ပြောဆိုကြပါ။
ဒီချုပ် ဘက်က နေ အမေ အမေ ခေါ်ပြီး အော်ဆဲပေးနေတိုင်း ကောင်းတယ်လို့ မထင်ကြပါနဲ့။
စေတနာနဲ့ ဆဲပေးရင်တောင်မှ ဒါဟာ သိက္ခာကျ စေဖို့ အန္တရာယ်ပါ။ အဲဒါလေး ကို အသိမျှပေးကြပါ။
ရည်ရွယ်ချက် နဲ့ တမင် ဝင်ပူးပြီး လုပ်နေသူများ ရှိနေတာကိုလဲ အထူး (အထူး) သိကြပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခု ပြောတော့ဘူးး
ဆဲချင်ရင်တောင် စဥ့်အိုးးထဲ ခေါင်းးစိုက်အော်ရမှာပဲ.. ခိခိ
NLD အမတ်တွေ က အရမ်းးယဉ်ကျေးးတယ်..
ကျော်တို့လို ဝန်းးရံသူတွေ က ဆိုးးတတ်တယ်
ကထူးဆန်း says: absolute right အရီး …
absolute right ဇီဇီ … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2399
aye.kk says: အရီးလတ်
@QUIL@ says: မှူးဇော် ယဲထွတ် အမှန်ချစ် လူဒုအောင်ပွဲဖျစ်….
kai says: ဒီအချိန်က.. သာကူး..မှန်ပြောင်း မသဲကွဲသေး…
ခြေတလှမ်းလှမ်းထားယုံတင်.. နောက်နောင်အနာဂါတ်အတွက်.. အကြီးအကျယ် ကွာသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာ့သမိုင်းသစ်ရေးရာမှာ.. သမိုင်းတရားခံစာရင်းကလည်း ..လွတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်…။
အနည်းဆုံးတော့.. ကိုယ်ထည့်တဲ့..မဲလေး.. ဖုံးနဲ့.. ဆဲလ်ဖီလုပ်ထားသင့်သဗျ..။
သက်သေခံလက်မှတ်ဖြစ်လာမယ်… ဆို…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လူမသိအောင် တိတ်တိတ်ခိုးပြီး အားပေးမဲ့သူတွေက သူတို့ ဘာကိုပေးတယ်ဆိုတာ ပြောရဲပါ့မလား။
ဦးကြောင်ကြီး says: တီတီမြ ကြည့်ဖို့ မှန်တချပ် ဝယ်ပေးအူးမှ… ရွာသာမြှားခညာ အဲဒီအတွက် အလှူ ငွေ ကောက်ပါဒရယ်.. ဂလောက် ဂလောက်….
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ကို ကျွန်မ ပြန်ကြည့်ပြီး မြင် လိုက်လို့ဒီစာ ကို ရေးပါတယ် ကြောင်ကြောင်။
အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်အပြစ် ကို ကိုယ်လဲ ကိုယ်ရှာကြည့်တတ်ဖို့ ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိပါသေးတယ်။
အပြစ် မတွေ့ရင်တော့လဲ တတ်နိုင်ဝူး။ lol:-))))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .Good advice, thanks!!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: သဘောတူတာ မတူတာ အပထားလို့ အခုအချိန် ဘာကိုရွေးရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိဖို့…
ခြံစည်းရိုးပေါ်က တွေဝေနေသူတွေ ကိုယ့်ဖက်ကို ခုန်ချလာဖို့…
စိတ်ရှည် ဇွဲသန် သည်းညည်းခံဖို့… သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ရှင်းပြကြဖို့…
နီးစပ်ရာကို သတိပေးရင်း တံဆိပ်ကပ်ခံရလို့…အခုတော့ ဘေးထွက်ထိုင်နေလိုက်တယ်…
လော်ကြူးရင် စောင်းချိတ်ရင် ဟိုဘက်ခြံထဲ တွန်းချသလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ သတိပြုမိကြပါစေ…
ဦးကြောင်ကြီး says: ကျောင်းဓါးမုန်းမှ ပါမစ်ရမဲစို လှုပ်လိုက်ဆမ်းပါ အူးfoxပျံ…
လုံမလေးမွန်မွန် says: စာတွေဖတ်ရင်း ဒေါသတွေထွက်.. စိတ်ဓာတ်တွေကျ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပြန်တင်း… ရူးများသွားမလားတောင် ထင်ရရဲ့… စိတ်လျှော့ထားလိုက်ပါပြီလေ…
မြစပဲရိုး says: စောစောက FB ထဲ မှာ ပန်းခရမ်းပြာ လူကြီး ခမျာလဲ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လာတွေ့တဲ့ ခိုလှုံခွင့်တောင်းသူ ဘဂါင်္လီ ကြီး ဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်တယ်။
ကိုရဲလွင်ကို သိသူတိုင်း ဒါဟာ အမှားလို့ သိမှာလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဘာကြောင့်လုပ်လဲ။
အဲဒီလို တွေ ဘာကြောင့်လုပ်နေလဲ၊ ဘယ်လို စာဖတ်ပရိတ်သတ် တွေ အတွက် ရည်ရွယ်လဲ ဆိုတာ အခုသိပြီ။
အဒေါ် နဲ့ စကားပြောတုန်း တစ်ချို့ သတင်းအမှား တွေ ကို သူက ပြောနေလို့ ဘယ်လို သိလဲ မေးတော့ သူ့မှာလဲ Facebook account ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။
“အမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား၊ ဘယ်သူ လုပ်ပေးလဲ” လို့ မေးတော့ ဆိုင်မှာ လုပ်ပေးသတဲ့။
ပြီးတော့ သူတို့ က ဒီလို သတင်းတွေ ဖတ်လို့ ရအောင် တစ်ခါထဲ ထည့်ပေး ဆိုဘဲ။
အဲဒါ မြန်မာပြည် ရဲ့ တောရွာတွေ က စမတ်ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း ဒီလို ဖြစ်ဖို့ များတော့မှာကို သိလိုက်ရတော့တယ်။
သူတို့ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ သတင်း တွေ ဟာ အဲဒီလို ပေါက်ကရ သတင်းတွေ ကို လွှင့်တဲ့ Page တွေ ဖြစ်နေရင်လဲ သူတို့ ဘယ်လို သိပါ့မလဲ။
တကယ်က ကျေးလက်လူထု ကလဲ အားမသေးလှဘူး။ ဖွတ် ကို မကြိုက်လဲ နေ။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ တွေကို မဲပေးလို့ ပြောနေတာ။
တကယ်တော့ အဲဒီလူ တွေ က ဖွတ်ခွဲ တွေ ဆိုတာ သူတို့ သိမှာမဟုတ်ဘူး။
တွေးလေလေ မြန်မာပြည်သူ လူထု တွေ ဟာ တကယ်ဘဲ သနားဖို့ကောင်းလေဖြစ်နေပြီ။
အာဏာရူး စစ်ဆင်ရေးကြားမှာ လူတွေ ရဲ့ တွေးခေါ်နိုင်မှု တွေ ကို ရိုက်ချိုး ဖျက်စီး ခံနေခဲ့ရတာ အတော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။
.မြောက်ကိုရီးယား လောက်မဆိုးပေမဲ့ ဒါဟာလဲ တစ်နေရာထဲ ကို ဘဲ ကြည့်နေအောင်၊ အသံတစ်ခုထဲ ကိုဘဲ ကြားနိုင်အောင် ဖန်တီးခဲ့မှု သဘောပါဘဲ။
အဲဒီ မတရားမှု၊ ဖိနှိပ်မှု တွေ နဲ့ ယဉ်ပါး အသားကျသွား ကြပြီလားတောင် မသိနိုင်တော့ဘူး။
ဘယ်ဟာက မတရားတာ၊ ဘယ်ဟာက တရားတာ လို့ တောင် မခွဲနိုင်ကြတော့တာ မြင်နေရလို့ ပါ။
kai says: အယ်ဒီတာဆိုတာ.. သတင်းဌာနဆိုတာ.. အကွပ်မရှိမဖြစ်အောင်..ထိန်းတဲ့ဟာပဲ..။
ဒါမရှိတဲ့ဖဘ… အဲဒီသတင်း တန်း… ယုံရင်..ယုံသူအပြစ်ပေါ့..။
အထိန်းအကွပ်ရှိတဲ့.. မြန်မာ့ဂဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လာကြ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဇီဇီခင်ဇော် says: အထုမှ တော့ ခေါ်မနေနဲ့တော့ ဟွန့်
ရွာထိန်းးမယ် သပုန်တွေပဲ ကျန်တော့တယ်
Traditional မြန်ကျန့်တွေ ပြေးးတာ ကြာပေါ့
uncle gyi says: ပူသတ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကအကျွမ်းကျင်ဆုံး